आज जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड : कति जनाले पाँउनेछन् सेयर ! | शुभयुग
आज जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड : कति जनाले पाँउनेछन् सेयर !
२३ असार,काठमाण्डौ – जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ आज बाँडफाँड हुने भएको छ ।
उक्त आईपीओको प्रि अलटमेन्ट सोमबार सम्पन्न भएको थियो । उक्त आईपीओ आज (बुधबार) बिहान ९:३० बजे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको कार्यलयमा हुने क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार अन्तिम दिनसम्ममा २० लाख ८४ हजार ७ सय ६२ जना आवेदकले ३ करोड १२ लाख ६६ हजार २६० कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारणका लागि माग गरिएकोभन्दा १६।९१ गुणा बढी हो । कम्पनीको आईपीओमा परेको आवेदन हालसम्म कै उच्च पनि हो ।
मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले आईपीओ गोलाप्रथाद्वारा बाँडफाँड गरिनेछ । अन्तिम तथ्यांकलाई हेर्दा ग्रोलाप्रथाबाट वितरण गर्दा १ लाख ८४ हजार ८ सय १ जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्नेछन् । जसमध्ये, १० कित्ता भन्दा धेरै आवेदन दिने ५ जनाले भने ११ कित्ता पाउनेछन् । त्यस्तै बाँकी करिव ९२ प्रतिशत भन्दा धेरै अर्थात् १९ लाख २ हजार ५ सय १९ जना आवेदकको हात खाली हुने निश्चित छ ।
नेप्सेले लघुवित्तको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्युनतम ३०५ रूपैयाँ २७ पैसादेखि अधिकतम ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने गर्दछ । सेबोनमा प्रकाशन भएको विवरण पत्र अनुसार जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को प्रतिसेयर नेटवर्थ ३०५ रूपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । सोही नेटवर्थको ३ गुणा ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा हुन्छ ।
कस्तो छ संस्थाको वित्तिय अवस्था ?
संस्थाले चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित वित्तिय विवरण अनुसार संस्थाले तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५६ करोड ३९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा हाँसिल गर्न सफल भएको देखिन्छ । गत बर्षको यसै अवधिमा संस्थाको खुद मुनाफा ३६ करोड ८१ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा सिमित थियो ।
तेस्रो त्रैमास सम्ममा संस्थाले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको देखिन्छ भने १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा हासिल गरेको देखिन्छ ।
४१ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको संस्थाको जगेडा कोषमा १ अर्ब १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आईपिओ निष्काशन पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ ।